Umaki: wokubala oku-inthanethi | Martech Zone
Umaka: wokubala oku-inthanethi
Ukwenza inhlolovo nokuqinisekisa ukuthi unempendulo evumelekile ongabeka izinqumo zakho zebhizinisi kuyo kudinga ubuchwepheshe obuningi. Okokuqala, kufanele uqinisekise ukuthi imibuzo yakho ibuzwa ngendlela engakhethi impendulo. Okwesibili, kufanele uqinisekise ukuthi uhlola abantu abanele ukuthola imiphumela evumelekile ngokwezibalo. Awudingi ukubuza wonke umuntu, lokhu kungasebenza kakhulu futhi kubize kakhulu. Izinkampani zocwaningo lweMakethe